सेयरधनीलाई ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिने क्षमतामा नेकाे इन्स्योरेन्स, (यस्तो छ १० वर्षको इतिहास) - Bizness News
आइतबार, मंसिर १२ गते २०७८
पर्यटन उड्डयन लाइफ एण्ड आर्ट मल्टिमिडिया राजनीति विविध कृषि
सेयरधनीलाई ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिने क्षमतामा नेकाे इन्स्योरेन्स, (यस्तो छ १० वर्षको इतिहास)
काठमाडौं- निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूमा अग्रस्थानमा आउने नाम हो नेको इन्स्योरेन्स। विगत वर्षदेखि नै राम्रो नाफा कमाइरहेको नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई पनि राम्रो लाभांश बाँड्दै आएको छ। जसका कारण पनि कारोबार हुने सूचीमा अगाडि नै पर्ने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गर्न बाँकी कम्पनीले कति लाभांश दिन सक्छ भनेर लगानीकर्ताको चासो बढ्दै गएको छ। वणिज्य बैंकहरू भन्दा अलि ढिलो साधारणसभा गर्ने बीमा कम्पनीहरूले लाभांश पनि ढिलै घोषणा गर्ने गरेका छन्। कतिपय कम्पनीहरूले त दुई वर्ष लाभांश दिन बाँकी नै छ।
निकोले भने गत वर्षको लाभांश पनि दिइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट कम्पनीले सेयरधनीलाई १५.५ प्रतिशत सेयर र ०.८२ प्रतिशत नगद गरी १६.३२ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो। नेकोले गत वर्ष २ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयरसमेत जारी गरेको थियो।
कम्पनीको १ करोड ५२ लाख १६ हजार ३ सय ३७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ। भने १ अर्ब ५२ करोड १६ लाख ३३ हजार ७ सय रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ। चुक्ता पुँजी पनि वृद्धि गर्ने तयारीमा रहेकोले कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट धेरै सेयर लाभांश र कम नगद लाभांश दिन सक्ने छ।
जसका कम्पनीको ४० प्रतिशत भन्दा माथि लाभांश दिन सक्ने क्षमता रहेकाे छ। तर क्षमता भएपनि कम्पनीले हालसम्म २१ प्रतिशत भन्दा बढी दिएकाे छैन्। कम्पनीको सेयर मूल्य ५२ हप्तामा अधिकतम १९०० रुपैयाँमा करोबार भएको थियो। त्यस्तै न्यूनतम भने ९८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। १८० दिनको औषत मूल्य भने १५०२.१८ रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीको मंगलबार अन्तिम मूल्य १२१७ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
कम्पनीको दश वर्षे इतिहासमा सबैभन्दा धेरै २०७२/७३ मा २१ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई दिएको थियो। कम्पनीले चालु वर्षको पहिलो तीन महिनामा ७ करोड १९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी पनि २१.८५ रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीको आम्दाी ८१ करोड ३७ लाख रहेको छ। भने २७ करोड ८७ लाख बीमा दावी भुक्तानी गरेको छ।
दश वर्षकाे लाभांश इतिहास
प्रकाशित : बिहीबार , मंसिर ९ २०७८०७:२७
पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
हेलिकोप्टरबाट उपकरण ढुवानी गरी विकटको ८ स्थानमा टूजी र फोरजी सेवा
एनआरएनए एनसीसीहरुको दोस्रो विश्व भेला १५ मंसिरमा
वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित अनुमति एकद्वार सेवा केन्द्रबाट, फागुनदेखि डिजिटल प्रणाली
चिलिमे-त्रिसूली थ्री बी हव प्रसारण लाइनको निर्माण ६० प्रतिशत सकियो
कसैको दबाबमा मौद्रिक नीति संशोधन हुँदैन : गभर्नर अधिकारी
ब्याजदरमा अर्थमन्त्रीकै हस्तक्षेपको लयमा निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंक, बैकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग
आईएमई जनरल र अपी पावरले हकप्रद जारी गर्ने, कुनको कति?
टेलिकमको सेयरमा झुम्मिए लगानीकर्ता, के बोनस सेयर दिन लागेको हो?
लगानीकर्ता आत्तिएपछि सेयर बजारमा भारी गिरावट, विश्लेषक भन्छन्–बजार २६०० अंकबाट उकालो लाग्छ
मौद्रिक नीति समीक्षा पछिको सेयर बजार १० मिनेटमै ४२ अंकको गिरावट
मध्य भोटेकोशीका सेयरधनीले सुरुमै २८३१ रूपैयाँ कमाउने, कहिले होला कारोबार?
मौद्रिक नीति समीक्षापछि सेयर बजारको भविष्य के? (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
Copyright © 2021 All right reserved to Bizness News